बिहेपछि महिलाको हि’प बढ्नुको यस्ता छन् १० अनौठा कारण ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/बिहेपछि महिलाको हि’प बढ्नुको यस्ता छन् १० अनौठा कारण !
प्राय जसो बिहे पछी महिलाहरुको शा’रीरिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख सकिन्छ । साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । सामान्य तय अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हि’प र स्त’नको आकारमा धेरै परीवर्त भएको देख्न सकिन्छ ।हाम्रो देशमा सामान्यतय महिलाहरु सानै उमेरमा शा’रीरिक विकास नभएकै बेला बिवाह गर्छन त्यस कारणपनि बिहेपछी हि’प र चे’स्टको साइज बढ्नु अथवा ठुलो हुनु सामान्य मानिन्छ । तर अमेरिकामा एक सोधकर्ताहरुले भने भिन्नै तथ्य पत्ता लगाएका छन् ।
बढुवा भएको खुशीमा एसएसपीले किनेको मिठाइमा मान्छेको नङ भेटिएपछि…..